एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला ? ( भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला ? ( भिडियो)
एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला ? ( भिडियो)
काठमाडौं । एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रो दन देख्दा कसको मन नरोला ? काखमा एक वर्षको बच्चा आमाको पी डामा संगै रोइरहेको छ । घर सानो झुपडी छ, आर्थिक अवस्था विपन्न यि महिलाले एउटै घ ट ना मा दुई साना छोराछोरी गुमाइन् । तीन दिन अघि रोल्पामा भएको ब म वि स्फो टमा आफ्ना दुई सन्तान विमला र विजयलाई गुमाएकी हुन् ।
कोरोनाभाइरसका रोगीहरुलाई निको बनाएपछि खुशीले नाचे डाक्टर (भिडियो)